Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ku kulmaya London +Sawiro – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaaraha Britain oo ku kulmaya London +Sawiro
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada London ee dalka Britain, halkaasoo la filayo inuu kula kulmo madaxda dalkaas, si ay uga wada hadlaan diyaarinta shirka May ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya.
Wafdiga Madaxweynaha oo ka soo kicitimay magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliya Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibada Fowziyo Yuusuf, Wasiiru dowlaha Madaxtooyada Faarax C/qaadir. La taliyeyaashiisa iyo saraakiisha Xafiiska Madaxweynaha.
Booqashada Madaxweynaha ayaa timid markii dowladda Britain casuumaad u fidisay, iyadoo Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’iisul Wasaare David Cameron ay ka wada hadli doonaan qaban qaabada iyo diyaarinta shirka 7-da May ka dhici doona London, kaasoo daba socday shirkii Febraayo ee sanadkii hore.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa si wada jir ah u shir gudoominaya shirka May dhici doono, oo ay ka soo qeyb geli doonaan in ka badan 40-dowladood oo deeq bixiyeyaasha ka mid ah.
Dhinaca kale Madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho ku tagi doona magaalada Qaahira ee dalka Masar, halkaasoo uu uga qeyb galayo shir ay leeyihiin Ururka Islaamka, kaasoo looga hadlayo arrimo muhiim ah oo quseeya dhaqaalaha iyo maalgashiga.
Safarada Madaxweynaha uu ku marayo dalalka caalamka ayaa waxay ujeedkooda yihiin sidii xiriirka Soomaaliya ay la leedahay beesha Caalamka loo xoojin lahaa, iyo sidii dowladiisa cusub taageero uga heli lahaa.
R/wasaare Saacid oo sheegay in maamulka dowlada si dhaqsi ah loogu baahindoono gobolka Sh/Hoose
Qarax ka dhacay banaanka hore ee Safaarada Mareykanka ku leeyahay Caasimada Turkiga ee Ankara